ရေချိုးခေါင်းမှာ ရေနည်းနည်းရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd.
ရေချိုးခေါင်းမှာ ရေနည်းနည်းရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
ဟိရေချိုးခေါင်းမိသားစုတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရေချိုးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေချိုးခေါင်းထဲက ရေက သေးနေတယ်ဆိုရင် ရေချိုးတဲ့အခါ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရေချိုးလို့တောင် မရဘူး။ ဒါဆို ရေချိုးခေါင်းသေးသေးလေး ရေကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ။
1. ပထမဆုံး အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းမှာ ရေချိုးခေါင်းကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရေချိုးခေါင်းတွင် ဇကာတစ်ခု ပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သဲအချို့ သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးငယ်များပင် စုပုံနေမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ရေချိုးခေါင်းကို ပိတ်ဆို့ပြီး ရေအနည်းငယ်ထွက်စေသည်။ အဲဒါကို ဖြုတ်ထားသရွေ့တော့ ဒီအခြေအနေက ပိုကောင်းတယ်။ ရေချိုးခေါင်းအတွင်းရှိ ဇကာကို သန့်စင်ပြီး ရေဖြင့် ဆေးပါ။
2. ဒုတိယအခြေအနေမှာ ရေဖိအားနည်းသည်။ ရေဖိအားနည်းရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ တခါတရံ ပိုက်ရေ ယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်ပေ။ ရေသန့်ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းများကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ရေဖိအား ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန် လာမေးနိုင်ပါသည်။
၃။တတိယအခြေအနေမှာ၊ရေချိုးခေါင်းပိတ်ဆို့ထားသည်။ အချို့နေရာများတွင် ရေသည် အယ်ကာလီအတော်လေးဖြစ်သောကြောင့်၊ ရေစကေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ရေချိုးခေါင်းကို ပိတ်ဆို့ရန် လွယ်ကူသည်။ သောင်တူးရန်အတွက် သွားကြားထိုးတံ သို့မဟုတ် အပ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေချိုးခေါင်းသည် အတော်လေး ချောမွေ့သော အခြေအနေသို့ ပြန်သွားပါမည်။
4. ရေချိုးခေါင်းမှာ ပမာဏအများကြီးပါရင် ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲကို ရှလကာရည်အဖြူကို လောင်းထည့်ပြီး ရေချိုးခေါင်းကို ထုပ်ပြီး တစ်ညလောက်ကြာတဲ့အခါ ရှလကာရည်ဖြူထဲမှာရှိတဲ့ အယ်လကာလီတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုး။ ထိုမှ ထုံးစကေးကို ဖယ်ရှားပါ။ရေချိုးခေါင်း. ဤနည်းအားဖြင့် ရေချိုးခြင်းသည် အတားအဆီးမရှိ ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
5. ပဉ္စမအကြောင်းရင်းမှာ ကြမ်းပြင်များအတော်လေးမြင့်နေသောကြောင့် သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးရေသုံးစွဲနေချိန်ဖြစ်သည်။ ရေဖိအားက သေးငယ်ပြီး ဖိအားကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ရေချိုးခေါင်းဒီအချိန်မှာ။ ဤရေချိုးခေါင်းအမျိုးအစားသည် စျေးမကြီးဘဲ အစားထိုးသည့်အခါ အလိုအလျောက်ဖိအားပေးနိုင်သည်။
6. ဆဋ္ဌမနည်းလမ်းမှာ ရေဖိအားနည်းသော အချို့နေရာများ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Booster Pump တပ်ဆင်ပါ။ ပိုက်အတွင်း ဖိအားပေးခြင်းဖြင့် ရေချိုးခေါင်းမှ ရေသည် ပိုကြီးလာမည်ဖြစ်သည်။